किन एक्लिए बाबुराम ? भट्टराईसँगको सम्बन्धविच्छेदको शृंखला - Dainik Nepal
किन एक्लिए बाबुराम ? भट्टराईसँगको सम्बन्धविच्छेदको शृंखला
दैनिक नेपाल २०७४ साउन २८ गते ६:०३
काठमाडौं, २८ साउन । विल्कुलै फरक, नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक दल निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ शक्तिको निर्माणमा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई दुई वर्षमै एक्लिएका छन् ।
३५ वर्षको कम्युनिस्ट राजनीतिबाट एकाएक ‘नयाँ कोर्स’ सुरु गरेका भट्टराई आफ्नो अभियानमा कामयावी हुन सकेनन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
भट्टराईले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी बनाउने योजनामा तीन लक्ष्य राखेका थिए, -पहिलो, आफूले निर्माण गर्ने वैकल्पिक पार्टी कुनै पनि वाद÷दर्शनमा आधारित नरहने । दोस्रो, विचारधारा पार्टीको भए पनि जातिवाद र क्षेत्रवादबाट मुक्त हुने र तेस्रो, आर्थिक समृद्धि र विकासलाई मूल ध्येय बनाउने । त्यसपछि नै उनले अगाडि सारेका यिनै तीन लक्ष्यमा जोडिन आइपुगे, विभिन्न प्रवृत्तिका शक्तिहरू ।
कहिल्यै पार्टीमा ‘फस्र्ट म्यान’ भई लिडरसिप नलिएका भट्टराईमा लिडरसिपमा हुनुपर्ने क्वालिटी नदेखिनु र आफ्नो गन्तव्यमा आफैं अलमलिनुले अहिले एक्लिँदै जाने परिस्थिति सिर्जना गरेको बताउँछन्् प्राध्यापक कृष्ण खनाल ।
‘पार्टी भनेको आज बनायो, भोलि नै टुम्पोमा पुग्ने भन्ने त हुँदैन तर बाबुरामजीको पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल इन्टेस्ट सबै हेर्दा उहाँमा लिडरसिप गर्ने क्षमताको अभाव देखिन्छ । लिडरसिपका केही क्वालिटी हुन्छन्, त्यसमा उहाँको पुगेको देखिएन,’ खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आफूलाई सबैले समर्थन गर्छन् भनेर मान्छेहरूप्रति तत्कालै इम्प्रेसन बनाउने र सुरुदेखि नै आफूले चाल्न खाजेको यात्राका विषयमा कन्फ्युजन पालेर बस्दा उहाँलाई साथ दिनेहरू छुट्दै गए ।’
‘आफ्नो लक्ष्य÷गन्तव्यमा प्रस्टता देखाउन सक्नुपर्छ, राजनीतिमा त्यो भट्टराईले देखाउन सक्नुभएन, त्यसले उहाँलाई अलमल्याइरह्यो,’ खनालले भने, ‘राजनीति र विद्वता फरक विषय हो, बाबुरामको पार्टीमा लागेपछि केही हुन्छ कि भन्ने अवसरवादीको जमात पनि त्यहाँ हाबी हुँदै गयो, यसले पनि उहाँको राजनीतिक यात्रामा असर पुर्‍यायो ।’
खासगरी भट्टराईले ‘सोसियल पोलिटिक्स’ बुझ्नै नसक्दा अहिलेको अवस्था आइपरेको नयाँ शक्ति निर्माणका क्रममा सँगै रहेका तर अहिले छाडेर विवेकशील साझा पार्टीमा लागेका नेता मुमाराम खनाल बताउँछन् । ‘जुन उद्देश्यसाथ नयाँ पार्टी निर्माण गर्न खोजिएको थियो, त्यसको उल्टो अभियानमा उहाँ (भट्टराई) लाग्नुभयो, जातिवादको प्रवर्तक र माओवादीको आधार छाड्नुभएन, उहाँ असफल हुनुभयो’, खनालले भने ।
नयाँ शक्तिभित्र रहेका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई अहिले लागेको छ-भट्टराईले विगतमा सँगै उनलाई साथ दिएका नेताहरूलाई भुल्दै गए ।’ नेता कुमार पौडेलले भने, ‘भट्टराईले इतिहास बिर्सन खोज्नुभयो, कार्यकर्ताको दुःख-सुखमा रमाउने भन्दा नयाँ गर्ने नाममा मात्रै रमाइरहनुभयो, यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि ल्यायो,’ पौडेलले भने ।
नेता खिमलाल देवकोटा पनि पछिल्लो चरणमा भट्टराईले पूर्वमाओवादीबाट आएका नेता-कार्यकर्तालाई टाढै राखेर जान चाहँदा असन्तुष्टि चुलिएको बताउँछन् । ‘पूर्वमाओवादीबाट आएकाबाटै संगठन चलाउन खोज्ने, संगठन निर्माणमा प्रयोग पनि गर्ने तर यसरी जाँदा नयाँ शक्ति बन्दैन कि भन्ने त्रास पनि पाल्दै जान थालेपछि नेताले पार्टी छाड्दै जान थाले,’ देवकोटाले भने ।
भट्टराईलाई अहिले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका गंगानारायण श्रेष्ठ, देवेन्द्र पराजुली र कल्पना धमलाले मात्र साथ दिइरहेका छन् । त्यसबाहेक फरक धारबाट आएका केशव दाहाल, डम्बर खतिवडालगायतले पनि उनलाई साथ दिएका छन् ।
नयाँ शक्ति निर्माण अभियानपछि उनले एउटा ब्रोसरबाहेक राजनीतिक दस्ताबेज लेखनमा भट्टराईले चासोसमेत दिएनन् । पछिल्लो संघीय परिषद् बैठकमा पेस भएको दस्ताबेजसमेत नेता डम्बर खतिवडाले तयार पारेका थिए । माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई भट्टराईको यो कदम पनि चित्त बुझेको थिएन । उनीहरू भट्टराईसँग त्यसपछि पनि थप सशंकित थिए । भट्टराईले गैरमाओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई महत्व दिन थालेको नेता देवेन्द्र पौडेललगायतलाई चित्त बुझेको थिएन ।
‘भट्टराईले संगठनात्मक पद्धतिमा जोड दिन सक्नुभएन, नयाँ प्रयोग गर्ने नाममा रमाउन मात्र खोज्नुभयो, इतिहासलाई भुल्दै जान थाल्नुभयो, यसले उहाँलाई एक्लो बनाउँदै लग्यो,’ नेता कुमार पौडेलले भने ।त्यसो हो भने अब भट्टराईका अगाडिका विकल्प के ? विभिन्न कोणबाट बहस सुरु हुन थालेका छन् । विश्लेषकका भनाइमा, अब उनीसँग तीन विकल्प छन् । उनी अहिलेकै नयाँ शक्तिका रूपमा राजनीतिक यात्रामा अडिन नसक्ने खालका टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
डन र गनबाट कमरेड मुक्त